निर्वाचनपछि गाउँदेखि माथिसम्म कांग्रेसको सरकार बन्छ, यो मेरो जिम्मा भयोः प्रधानमन्त्री | हिमालयन ट्रिबुन
२०७८ मंसिर २४, शुक्रबार १९:२६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी एक कार्यकालका लागि एकपटक आफूलाई सभापतिमा विजयी गराउन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार पार्टीको महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले डरत्रासमुक्त समाज निर्माणका लागि आफूलाई विजयी गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो सरकार गठन हुनुअघि जनता डरत्रासमा बसेका भन्दै आफ्नो सरकार गठनपछि जनताले डरत्रासबाट मुक्ति पाएको अभास गरेका बताए । उनले भने,‘मेरो सरकार गठनअघि कस्तो त्रास थियो ? अहिले मुक्ति पाए जनताले । ओलीको शासनबाट मुक्ति पाए जनताले। अब त्यो मुक्तिलाई बचाउने हो कि के हो ? यो महाधिवेशनले तानाशाही सरकार नआओस् भन्नका लागि निर्णय गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनपछि गाउँदेखि माथिसम्म कांग्रेसको सरकार बन्छ । यो मेरो जिम्मा भयो ।’
उनले देशभरबाट कतिपय साथीहरु प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर आएको भन्दै मनमुटावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘फेरि स्थानीय, संघीय चुनाव आउँछ । हाम्रो आन्तरिक निर्वाचनले आगामी निर्वाचनमा कुनै समस्या नआओस् । मिलेर जानुपर्छ सबै साथीहरु । काग्रेसको सरकार रहिरहे स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरकार कांग्रेसको हुनेछ र स्थानीय सरकार रहिरहे राष्ट्रिय सरकार कांग्रेसको हुनेछ । मलाई एक पटक जिताइदिनोस् । त्यही हो साथीहरु । मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन । डरत्रासबाट मुक्त शासन ल्याएर छाडिन्छ । ओलीको जस्तो त्रासयुक्त सरकार कहिल्यै आउँदैन । डरत्रासमुक्त शासन ल्याएर सरकार ल्याइन्छ, बनाइन्छ तपाइँहरु मलाई साथ दिनुस्।’ प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ नेता पौडेललाई भने व्यंग्य गर्दै भने, ‘रामचन्द्रजीले
उनले देशभरबाट कतिपय साथीहरु प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर आएको भन्दै मनमुटावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘फेरि स्थानीय, संघीय चुनाव आउँछ । हाम्रो आन्तरिक निर्वाचनले आगामी निर्वाचनमा कुनै समस्या नआओस् । मिलेर जानुपर्छ सबै साथीहरु । काग्रेसको सरकार रहिरहे स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरकार कांग्रेसको हुनेछ र स्थानीय सरकार रहिरहे राष्ट्रिय सरकार कांग्रेसको हुनेछ । मलाई एक पटक जिताइदिनोस् । त्यही हो साथीहरु । मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन । डरत्रासबाट मुक्त शासन ल्याएर छाडिन्छ । ओलीको जस्तो त्रासयुक्त सरकार कहिल्यै आउँदैन । डरत्रासमुक्त शासन ल्याएर सरकार ल्याइन्छ, बनाइन्छ तपाइँहरु मलाई साथ दिनुस्।’ प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ नेता पौडेललाई भने व्यंग्य गर्दै भने, ‘रामचन्द्रजीले चीसोका कारण बोल्न सक्नु भएन विचराले के गर्ने ?’
चीसोका कारण बोल्न सक्नु भएन विचराले के गर्ने ?’
Spread the loveकाठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा अब राजतन्त्रको कुनै भविष्य नभएको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राजतन्त्रलाई फेरि शिर उठाउने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । उनले भने,‘१६ वर्षअघि कांग्रेसको महाधिवेशनमा भाग लिएको थिएँ । त्यतिबेला […]
२०७८ असार ३०, बुधबार १४:२६
ओली बालुवाटारबाट बालकोटस्थित आफ्नै निवास फिर्ता
२०७८ बैशाख ३०, बिहीबार १६:१८
२०७७ पुष १३, सोमबार १०:२६
विघटन भएको भनेको केपी ओलीको सरकार हो, संसदको होइनः प्रचण्ड